MMW ၏ post အသစ်/အဟောင်းများကို Google Reader ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန် « MMWeather Information BLOG
« 2010 အတွက် မုန်တိုင်းရာသီ ကုန်ဆုံးပြီလော ? အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ် JAL (05B) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်နေ »
MMW ၏ post အသစ်/အဟောင်းများကို Google Reader ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်
By skywatcher, on November 9th, 2010
ကူးယူပြီးပါက Google Reader ကိုဖွင့်၍ AddaSubscription button (အောက်ပုံတွင် ကြည့်ပါ)ကို နှိပ်ပြီး ကော်ပီကူးယူထားသည့် လင့်ကို paste လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် တစ်ဘက်ပါအတိုင်း MMW Blog Post များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိဖတ်ရှုလိုသည့် post ကို ကလစ်တစ်ချက်လုပ်ရုံဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နည်းပညာ Google-Reader, Post-subscription « 2010 အတွက် မုန်တိုင်းရာသီ ကုန်ဆုံးပြီလော ? အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ် JAL (05B) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်နေ »
« 2010 အတွက် မုန်တိုင်းရာသီ ကုန်ဆုံးပြီလော ? အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ် JAL (05B) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်နေ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum